Ireo morontsiraka tsara indrindra any Hong Kong | Vaovao momba ny dia
Ny morontsiraka tsara indrindra any Hong Kong
Ranomasina sy ranomasina | | Hong Kong, tora-pasika
Mety ho ilay sary ananan'ny maro amintsika Hong Kong ho toy ny jiro neon sy ny trano famataran-trano goavambe. Saingy, ao amin'ity faritra tantanan'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina ity dia misy torapasika marobe mahaliana izay ahafahanao milomano, milentika masoandro, misitrika na manao surf.
Anisan'izany, ny nosy Lantau dia tsy isalasalana fa tokony hasongadina. Raha vantany vao eto ny mpizahatany sy malaza indrindra Helodranomasina Silvermine, na dia maro aza no maniry ny morontsirak'i Cheung sha. Ireo no morontsiraka lehibe indrindra any Hong Kong. Paradisa kokoa izany Tai Long Wam, morontsiraka izay raha mahita azy amin'ny carte postales dia tsy apetrakao tsara ao Hong Kong. Misy zavatra mitovy amin'izany Tora-pasika, zana-kazo kely any atsimon'ny Nosy Lamma ary mihidy amin'ny mpizahatany mandritra ny enim-bolana isan-taona, rehefa manatody ireo sokatra. Ity no morontsiraka mahazatra ahafahanao mitady fitoniana.
Manana morontsiraka hafa ny Nosy Lamma, fa angamba tsy misy toa azy Hung shin yeh, ny lehibe indrindra ary miaraka amin'ny serivisy fototra rehetra handaniana andro iray miaraka amin'ny fianakaviana. Tahaka ny ankamaroan'ny morontsiraka any Hong Kong, misy andiana boulôzy volomboasary izay mametra ny faritra fandroana azo antoka, lavitra ny fisian'ny antsantsa. Nosy Cheung Chau farafahakeliny manana morontsiraka telo hankafizana. Ny lehibe Torapasika tung wan, ilay cove efa foana Pak Tso Wan yKwum YamWan, ny mahafinaritra indrindra sy mpizahan-tany indrindra amin'ireo telo ireo satria noheverina ho iray amin'ireo paradisa mahafinaritra amin'ny fivezivezena any Hong Kong.
Na dia miresaka surf aza isika, ny morontsiraka tokana ekena amin'ny fomba ofisialy ity fampiharana ity dia ny Helodrano onja lehibe. Tonga teto ny mpikotroka voalohany tamin'ny taona 1970, na dia nipoaka aza izany tato anatin'ny taona vitsivitsy. Ny fihazohazan'ny mpizahatany dia mifantoka indrindra amin'ny torapasik'i Shek O, toerana iray voahodidin'ny havoana sy harambato avo ary tafasaraka amin'ny tampon'ny vatolampy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » tora-pasika » Ny morontsiraka tsara indrindra any Hong Kong
Costa Smeralda, faritra voafantina fizahan-tany lafo vidy ao Sardinia
Jericoacoara, anisan'ny morontsiraka tsara indrindra any Brezila